Fitsinjarana GNU / Linux tonga lafatra: openSUSE 13.1 !!! | Avy amin'ny Linux
Salama namana, tamin'ity volana ity aho dia volana iray tena mikorontana no nitsambikina tamin'ny solosaina PC sy ny solosaina findainy avy any distro mankany distro (izay mahazo ahy indray mandeha isaky ny roa taona). Rehefa nandinika tsara an'io fanontaniana io aho dia nahatsapa zavatra tena lehibe :).
Ny olana dia tiako ny vaovao farany nefa miaraka amin'izay dia tiako ny mitazona fizarana milamina sy tsara tarehy ary miompana amin'ny tanjona amin'ny serivera, birao kely ary kahie.
Nahatratra vokatra tena mahaliana aho taorian'ny herinandro fitsapana, izay nahitam-bokany.
Nametraka openSUSE 13.1 aho tamin'ny mpizara ahy nisolo an'i Debian sy CentOS ary koa tamin'ny PC-ko ary tao amin'ny solosainako nanolo an'i Fedora.
Hay tatoazy io Debian como el Efa lany andro loatra i CentOS ary misy ny asa tsy maintsy hajaiko na dia amin'ny mpizara aza.
Etsy ankilany, i Fedora dia toy izany, ankehitriny, fa indraindray dia miseho ny bibikely hafahafa ary tsy mahafaly ahy ny manavao ny kernel nateraky ny fanavaozana isaky ny roa na telo herinandro, izay miteraka ny asa tsy maintsy atao esory ireo voa teo aloha sns.
OpenSUSE dia fanapariahana tena milamina, voadio, misy ary misy tanjona amin'ny ankapobeny amin'ny PC sy ny mpizara.
Afaka niara-niasa tamin'ny openSUSE aho tamin'ny lohamilin'ny orinasa iray tany Alemana ary gaga be aho nahita ny fihetsika distro be io
Izany no nahatonga ahy nametraka izany tamin'ny mpizara ahy, tamin'ny solosaina findaiko ary teo amin'ny solosaina findainy.. Ireo mpizara dia manana azy tsy misy tontolo iainana ary amin'ny ambiny dia manana an'ity distro ity aho miaraka amin'ny tontolon'ny KDE manolo ny XFCE mitondra tena tsara sy maivana.
Atoroko anao ny latabako ary ataoko fa roa andro sisa ny Noely:
Atoroko anao izao ny toerana anaovana azy io sy ny fomba handefasana azy aorian'ny fametrahana azy:
Manokatra ny terminal izy ireo ary manoratra:
(manoratra ny teny miafiny izy ireo)
Ao amin'ny terminal ihany no manohy ireto dingana manaraka ireto:
Fametrahana fonosana tena ilaina:
zypper install vlc vlc-codecs fetchmsttfonts rar unrar java-1_7_0-openjdk-devel [/ Fehezan-dalàna]
Fonosana tsy voatery:
Ary vonona !!! Izy ireo dia efa manana openSUSE miaraka amin'ny KDE voaomana tanteraka amin'ny fampiasana ankapobeny.
Ho an'ireo izay liana, ny lohahevitry ny windows ahy dia FormaN, ny lohahevitra KDE dia Diamant ary ny sary masina dia OxyXmas misy eto: http://spacepenguin.de/icons/index.html
Miarahaba ary aza adino ny maneho hevitra
Tratry ny krisimasy sy tratry ny taona vaovao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Fitsinjarana GNU / Linux tonga lafatra: openSUSE 13.1 !!!
Miarahaba anao amin'ny solosainao aho ary manana azy ireo araka ny tadiavinao ianao, fa kosa nametraka OpenSuse 13.1 aho ary rehefa nanangana indray ny fizarazaran'i Windows dia tsy niseho, rehefa avy nanadihady dia hitako ny lalana fa tsy tiako izany olona iray izany dia tsy manana fahalalahana mitovy amin'ny ao amin'ny Netrunner, Kubuntu, Kaos, Chakra raha hiteny vitsivitsy izay nampiasako.
Ho famaranana… namerina nametraka an'i Netrunner aho.
Tsy laviko izay nanjo anao, fa ny installer OpenSuse no tsara indrindra raha ny fametrahana sary. Ny fametrahana izay nolazainao tamiko (tsy misy fanovako na inona na inona) no tena mety indrindra ary nanaja ny fizarazaran-drakitra NTFS izay nananako tamin'ny Windows 7. Safidiko foana ny safidy manokana amin'ny fizarazarana.
Tsy miresaka momba ny installer aho ... Tena tsara ary manamarika aho fa mampiasa Windows ihany koa aho fa rehefa miverina indray aorian'ny fametrahana azy dia tsy mampiseho ny OS hafa amin'ny GRUB. Tsy maintsy miditra amin'ny OpenSUSE aho ary manamboatra avy amin'ny YAST ka fa azo jerena amin'ny voalohany amin'ny GRUB ny SW rehetra
Ary ny tiako holazaina dia ny hoe Netrunner na Kubuntu na MintKDE dia azo namboarina sy azo tanterahina kokoa noho ny OpenSUSE noho izay angatahiny aminao ho fanamafisana ny zava-drehetra fa kosa miaraka amin'ny BlueSystem dia mora kokoa sy azo ampiharina kokoa.
Eny ... amin'ny faran'ny andro dia tian'ny rehetra ny "fomba fanoritana hafa", izany no mahatonga ny fizarana maro hanandramana hitazona ilay mifanentana indrindra aminao. Ny tsiro dia matsiro ary ny voany dia hanitra.
Raha tadiaviko ny tsy mangataka amiko alalana momba ny asa mila faka…. Miditra amin'ny maha-faka na faka-paka ny mpampiasa ahy aho, misy zavatra tsotra manova ve mahatonga anao handà ny fizarana mahafinaritra?
Hafahafa, nampiasa openSUSE aho nanomboka tamin'ny 11.0 ary ny marina dia mbola tsy nahita an'io olana grub lazainao io aho.
Misaotra betsaka anao niarahaba anao. Raha ny olana grub dia tsy nampiasa Windows nandritra ny taona maro aho ka tsy miraharaha izany mihitsy: D.
Ity valiny ity dia natao ho an'i Ghermain
Ianao ve nanandrana ny arikanlava?
Eny, hitako fa mitovy amin'ny openuse hafa rehetra, normalillas, miaraka amin'ny fitantanana ny repos, rehefa ampidirinao ny any ivelany, zavatra mankaleo.
dia tena mora ny mitantana repos amin'ny zypper, izay tena hafa noho ny fomba fitantanana apt-get azy ireo
tsotra? Yast raha vantany vao mametraka repos iray na roa ianao, dia manomboka manelingelina ny famahana ny fiankinan-doha sy ny manaraka.
Miaraka amin'ny zypper dia azonao atao ny mitantana fonosana avy amin'ny trano firaketana samihafa, ary eny, ahoana no tsy tianao hanombohako manelingelina ny fiankinan-doha rehefa tsy fantatro izay atao?
ao amin'ny Ubuntu rehefa manampy repositories ivelany aho dia mbola tsy nanontany ahy hoe maninona ny fiankinan-doha no misafidy na zavatra hafahafa, izay toa 2006, dia fantatra fotsiny.
Ao amin'ny Arch sy ny derivatives-ny, ny fampiharana ny fampiasana repositories dia manjelanjelatra fotsiny: mahafinaritra, azo ampiharina, mangarahara amin'ny mpampiasa, atambatra amin'ny toerana iray fotsiny ary miaraka amina rafitra hierarchy izay mamela an'i Zypper amin'ny vanim-potoana vato.
Andramo samirery dia ampahafantaro anay.
Ny zypper dia afaka manampy / manaisotra / manova / mamela / manafoana tahiry raha tsy mila manova rakitra na manao laharam-pahamehana ny fonosana, noho izany dia efa mahazo aina sy azo ampiharina kokoa izy io.
Nampiasa OpenSUSE aho nandritra ny 4 taona tamin'ny solo-sainanao 4 ary afa-tsy ny fananganana tahiry tsy ofisialy dia tsy nanana olana miankina amin'ny fiankinan-doha aho. Miorina amin'ny zavatra niainana fohy ny hevitrao.
Eny, satria tsy misy na inona na inona ary tsy misy olona tonga lafatra, izany no akaiky indrindra azy.
Raha ny amiko dia efa nahafa-po ahy i Debian ary tsy hiala aho raha tsy ho an'ny disto rehetra i Iceweasel (ao anatin'izany ny Fedora sy RHEL).
Azonao atao ny mametraka ny IceCat amin'ny fizarana rehetra, farafaharatsiny mba nanao izany tao amin'ny Fedora aho. Tsy haiko ny antonyo, manana zavatra tsy ananan'i Firefox na fork sasany ho an'i Fedora i Iceweasel?
Ny kernels ao amin'ny Fedora dia voafafa ho azy: /
Etsy ankilany, OpenSUSE dia fizarana mbola tsy maintsy hosedraina, saingy tamin'ny farany dia reraky ny fanovana fizarana tsirairay (distrohoppear) aho ary saika tsy hiova aho.
Angamba tsy nohazavaina tsara ilay lahatsoratra, satria tsy azoko koa ny tsikera.
Ny Fedora dia nanana ny voamadilo farany azo havaozina hatrany. Rehefa nampiasa ny mpamily nvidia aho dia tonga iray andro taty aoriana noho ny fanavaozana ny kernel dia nahitsiny, ka efa fantatro fa tsy maintsy nampiasa ny kinova kernel teo aloha aho ary araka ny filazanao fa mitazona kinova telo foana izy io, mamafa ny be indrindra taloha. Angamba mampiasa tena hafa mihitsy aho, fa miaraka amin'ny Fedora sy OpenSuse dia tena faly aho ary tsy manana olana.
Vakio ity dia hoy izy:
Taorian'ny fitsapana marobe dia nijanona tamin'ity iray ity aho. Ny hany zavatra ratsy momba azy dia, araka ny filazan'izy ireo, ireo repo. Ohatra, isaky ny manavao ianao dia tsy maintsy manana kopian'ny DVD apetraka satria ny fanavaozana dia delta fotsiny amin'ilay fonosana hanavaozana (ary raha tsy manana ny DVD amin'ny solosainao ianao na tsy manana iso maka toerana any ho any, ho fanampin'ny delta Misintona ny fonosana voalohany ianao, izany hoe indroa misintona nefa tsy mampandre anao; tsy lazaina intsony fa ny safidinao default dia mamafa ny zava-drehetra alaina aorian'ny nametrahana azy, ka io zavatra io ihany no averimberina isaky ny fanavaozana, mety ho mazava ho an'ireo izay nampiasa izany. rpm fa tsy ho an'ny mpampiasa hafa). Tsotra ny fametrahana haino aman-jery fa ny packman repo dia havaozina isaky ny telo andro, izay manery anao hamerina ny zava-drehetra matetika (ary raha manana lalao megabytes an-jatony ianao, dia mitovy).
Ho an'ny ambiny, dia marin-toerana izy io, milamina ary vaovao (ity no iray amin'ireo distros lehibe izay saika tsy misy derivatives, izay milaza betsaka momba ny kalitaony). Ny repo no hany ilain'izy ireo hatsaraina.
Valiny tamin'i Lelo
Tsy manaiky aho !!!
Nametraka ny Fedora 19 aho ary vonona hijanona mandritra ny fotoana maharitra (raha mbola mianatra ny hametraka Arch) fa tsia, toy ny nomen'i Fedora ahy foana (ho ahy) dia natomboko ny Fedora ary nampiasaiko ary rehefa afaka kelikely dia manomboka hirodana ny varavarankely. loko mainty ary tsy nahita na inona na inona ary indraindray tsy afaka namono ny netbook satria tsy hitako dia tsy hitako ny vahaolana.
Avy eo nametraka Xubuntu aho ary raha niasa tsara tamin'ny voalohany fa tsy haiko hoe naninona no nanomboka nanome ahy olana kely (somary niadana kely ary, iray hafa amiko, tsy azoko avela mihitsy araka izay tadiaviko 🙁).
Tamin'ny farany, nanapa-kevitra ny hanandrana distro hafa aho ary amin'izay aho mahatadidy OpenSUSE sy KDE, mametraka OpenSUSE KDE, manamboatra azy ary milamina tsara, tsy misy olana (izaho aza tsy nanana olana nandeha tamin'ny 12.3 ka hatramin'ny 13.1) ary ho ao aho mandra-pahatongan'ny mianatra ny fomba fametrahana-configure-use Arch, fantaro ny fomba fampiasana-ampanjifaina Fluxbox ary manana fotoana kely amin'izany.
Eny, nanandrana nitady fatratra ny fizarana "IDEAL" sahaza ahy indrindra aho ary farany nampiasa an'i Netrunner, amin'ny KDE rehetra dia ity no mety amiko indrindra amin'ny zavatra rehetra entiny ary tsy mbola nanome olana lehibe na olana tsy voavaha Mitady ao amin'ny google.
Manjaro Linux Community dia hoy izy:
Manjaro sy ny mpiara-monina aminy dia misy zavatra holazaina momba an'io: Tena? : endrika Troll:
Valiny amin'ny Manjaro Linux Community
tsy hevitra tena tsara hampiasa zypper dup (dist-upgrade) amin'izany
Tsy mbola nahita olana tamin'ity baiko ity aho niaraka tamin'ny repo default amin'ny openSUSE miampy Pacman .. Raha lozika raha mampiasa repo ivelany bebe kokoa ianao dia tsy maintsy ampifanarinao amin'ny laharam-pahamehana ny tsirairay amin'izy ireo mba hisorohana olana
dia toy izany koa…
Yohan Graterol dia hoy izy:
Ny Fedora miaraka amin'ny yum dia mamaha azy ireo ho azy ny tonta taloha: S Tsy haiko ny antony anesoranao azy amin'ny tanana.
Valiny tamin'i Yohan Graterol
Eny, nesoriko foana ireo voanjo .. Notehiriziko foana ireo roa farany. Fanontaniana momba ny ladoany 🙂
satria ny apt-get dia tsy mahay mitantana fonosana avy amin'ny famerenana samihafa ary rehefa izany dia simba ny fametrahana ny buntu *
ity fanehoan-kevitra ity dia natao tany @ pandev92
Hasher Arg. dia hoy izy:
Rehefa nanandrana sy nampiasa ireo fizarana rehetra nolazainao aho, amin'ny asa sy ny fampiasana manokana, azoko atao ny milaza fa ny distro tsara indrindra rehetra KDE distro miaraka amin'ny tsingerina fanavaozana ara-drariny sy maharitra dia ...
Tsy misy intsony, tsy latsa-danja, andramo, ampiasao, eny fa na dia ny dikanteny mini me mini aza, miaraka amina marina sy tsotra dia tsara ny manangana rafitra miaraka amina programa sy fikirakira mora.
Mamaly an'i Hasher Arg.
OpenSUSE dia distro tena tsara, saingy tsy maintsy ataonao ary esory ny fiomanana. Tsy haiko raha misy mahalala fametrahana net installer
avy amin'ny OpenSUSE, na ahoana no hametrahana ny rafitra fototra fotsiny?
Tamin'ny nanombohako tany Linux, tamin'ny 2004, dia tsy maintsy nataoko toy izao. Nosintomiko aloha ny kdebase ary avy teo no nametrahako ny hafa rehetra. Mazava ho azy, tamin'izany fotoana izany dia nanana fifandraisana 56k fotsiny aho. Toa mandreraka be izao.
eo amin'ny pejy fisintomana dia manana safidy netinstall ianao
Salama Hotantaraiko ny zavatra niainako.
Napetrako tato ho ato ao amin'ny kinova Gnome, miaraka amin'i Debian izay ampiasaiko isan'andro.
Tsy dia tiako loatra ny Gnome 3, hitako fa tsy dia azo namboarina izany na tsy azoko ny fomba handrindrana azy, miampy io dia miadana be amin'ny PC-ko, ka nesoriko izy ary napetraka Xfce. Mbola mila polesiko io 🙂
Izaho koa dia manana E17 napetraka ary tena tiako, mahafinaritra be.
Manana olana amin'ny fiteny aho, ny Espaniola dia antsasaky ny rafitra ary ny sasany amin'ny anglisy. ary zavatra misy ilay feo mandeha mangina fotsiny indraindray.
Ny tiako no Yast2, heveriko fa tsara ny manana tontonana fikirakirana toy izany amin'ny zavatra rehetra mifangaro. Zava-baovao ihany koa izay tiako, ny mankany amin'ny pejy ofisialy ary ampio ireo repositories "amin'ny tsindry tokana".
Heveriko fa distro tsara izy io, mila manandrana azy amin'ny PC maoderina hafa aho nefa tsy mila manova ny tontolo iainana na manova azy be loatra. Tena zatra an'i Debian aho ary misy zavatra tsy haiko atao amin'ny openSUSE, tsy mitovy ny lahatahiry sy ny rakitra fikirakirana.
Vao avy nametraka azy aho omaly, nanana olana tamin'ny networkmanager fotsiny aho fa tsy mandeha io fa namboariko haingana be tamin'ny yast2 izay toa tena tsara tamiko, satria nametraka jiro ho an'ny virtualhost aho ary afaka mamelona sy manafoana apache sy mariadb. Efa nanandrana ny openuse teo aloha aho, saingy tsy nety, tamin'ity indray mitoraka ity dia tiako io, androany ihany aho no nirehitra ary taorian'ny grub dia tsy nisy intsony io dia niverina indray. Ka tsy misy mihitsy, hiezaka aho hitady ny vahaolana, satria na ny grub aza dia natao manokana ary tiako ilay lohahevitra kde.
Joselu68 dia hoy izy:
Te-hanome hevitra aho fa manamafy ihany koa fa ny OpenSUSE dia safidy tsara hafa dieny izao. Nampiasako azy io tato ho ato. Nanana Kubuntu 13.04 aho ary tamin'io faran'ny fanohanana io dia nisondrotra ho 13.10 aho. Tena ratsy ny vokany, zavatra maro no nanomboka tsy nahomby. Nataoko ity fametrahana indray ity, ary tena tsara ny fahatsapana. Ohatra, efa afaka mampiasa ilay takelaka plasmoid aho. Ary farany, ny korganizer dia mampifanaraka tsara ny DALANA sy ny lafiny roa amin'ny kalandrie gmail-ko. Ary ny lyx dia tsy manome tsy fahombiazana hafahafa amiko. Ity ho fanehoan-kevitra momba ireo zavatra hitako tsara kokoa. Hitako ho voadio kokoa ihany koa izy io ary vita tsara kokoa.
Valiny tamin'i Joselu68
Eny te-hanampy aho fa misy toerana fitahirizam-piarahamonina maro izay mahaliana ny tokony ampiana. Azontsika atao izany, tsy mila ampidirina amin'izy ireo miaraka amin'io baiko io isika, amin'ny safidy hitantanana ireo trano fitahirizana, ary eo ny "toerana fitahirizam-pokonolona" omen'i Yast antsika. Mieritreritra aho, ohatra, ny fitoeran-tranonkala libdvdcss, Mozilla, Libreoffice ... ary ny fomba hamaritana azy rehetra ka misy ny lohalaharana amin'ny sasany.
Na ho ela na ho haingana dia hiverina ianao, izao no mahazo ahy rehefa miala amin'ny faritra mampionona ahy aho amin'ity tranga ity Fedora: p nefa hitako fa amin'ny ho avy dia hanandrana ny CentOS 7 ianao ary tsy handeha hifindra mandritra.
Miandry ny CentOS 7 aho .. ho fizarana lehibe toa ny RHEL rehetra, saingy tsy maintsy ekena fa efa lany andro tanteraka ny kinova faha-6 .. Tonga ny fotoana hiovana 😀
Tsara distro somary be loatra noho ny tsiroko ka izay no aleoko fedora.
Misaotra betsaka fa nanampy ahy be dia be izy io, ho an'ny vao novista mahantra, misaotra
vanim-potoana dia hoy izy:
Novakiako teto fa nanana olana tamin'ny fiteny ianao, fa nanana ny antsasaky ny rafitra tamin'ny Espaniôla ary ny iray kosa tamin'ny anglisy. Izay no mahazo ahy.
Azonao atao ve ny manamboatra azy io?
Ny zava-misy dia eo amin'ny birao no ananako tsara daholo ary nametraka azy avy amin'ny fiteny YaST> aho, fa amin'ny solosaina finday kosa tsy mety izany, ary tsy hitako intsony ny fomba hanaovana azy.
Mamaly amin'ny fahaverezana
Tsy nanana olana tamin'ny fiteny tany amin'ny openSUSE aho. Safidio fotsiny ny fiteny tianao amin'ny Yast ary sokafy ny terminal ary soraty eo ambanin'ny faka:
fanavaozana ny zypper
Hametraka tanteraka ilay fiteny izany. Avy eo averinao indray ilay pc ary dia izay.
Raha tehirizina ireo dingana ireo, dia tena mamporisika anao hampiasa ny DVD openSUSE hametrahana azy satria misy ny tontolo manan-danja rehetra miampy ny fiteny na, raha tsy izany dia ampiasao ny kinova netinstall :).
Mampiasa ny dadatoako ........... miala tsiny, nampiasa ny Linux tamin'ny solosainy izy nandritra ny telo andro fotsiny.
Manahaka an'i Linus Torvalds: Mamorona rafitra fiasao anao avy eo am-boalohany (II)